ညီမအရင်းလို ချစ်ရတဲ့ သဇင်ထူးမြင့် နဲ့ စကားပြောထားတာလေးတွေကိုထုတ်ပြပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ယွန်းယွန်း….. – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက် အချစ်တွေ ကို ရရှိထားကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ယွန်းယွန်းနဲ့ သဇင်ထူးမြင့်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတော့ ညီအစ်မအရင်းတွေလို ချစ်ခင်ရင်းနှီးကြသူတွေပါပဲ..။ အတူသွားအတူလာ အမြဲတတွဲတွဲနဲ့ရှိကြတဲ့ သဲတုံနဲ့ ယွန်းယွန်းတို့လက်ရှိအခြေအနေတွေ မှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေပြီး အခုဆိုရင်သဲကတော့ မိသားစုလိုက်နေအိမ်ကနေရှောင်တိမ်းနေရတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ယွန်းယွန်းကတော့ ညီအစ်မအရင်းတွေကိုချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သဇင်ထူးမြင့် အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ ဝမ်းနည်းစိတ်ပူနေသလို ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်လည်း စိုးရိမ်နေရတဲ့အကြောင်းလေးကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်..။ သေချာပေါက်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုတဲ့သဇင်ထူးမြင့်ကို စောင့်နေမယ်ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ အားပေးစကားလေးပြန်လည်ပြောထားတာလေးကို ယွန်းယွန်းကဝမ်းနည်းစွာဝေမျှရင်း ရင်ဖွင့်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
“၇ရက်ရှိပါပြီ.. သူငယ်ချင်းလဲ ပါသွားပါတယ် ။ ဘယ်ချိန်ထိ ချုပ်နှောင်ထားမှာလဲဟင်..? အထဲကသူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ GenZ တွေ မို့စိတ်ဓာတ်မကျမှာ ယုံကြည်ပေမယ့် အပြင်ကမိဘတွေ မိသားစုတွေ စိတ်ထိခိုက်နေရပါပြီ.. ကျောင်းသားတွေကို ပြန်ပေးပါတော့ 💔 ကူညီနိုင်တဲ့သူတွေ ကူညီပေးကြပါ 🙏🏻..” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစွာရေးသားထားတာပါ..။ ပြည်သူပရိသတ်တွေကလည်း ယွန်းယွန်းနဲ့အတူ ထပ်တူခံစားကြရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို comment တွေမှာ စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသားပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ ပရိသတျတှရေဲ့တဈခဲနကျ အခဈြတှေ ကို ရရှိထားကွတဲ့ အနုပညာရှငျတှဖွေဈကွတဲ့ ယှနျးယှနျးနဲ့ သဇငျထူးမွငျ့တို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျကတော့ ညီအဈမအရငျးတှလေို ခဈြခငျရငျးနှီးကွသူတှပေါပဲ..။ အတူသှားအတူလာ အမွဲတတှဲတှဲနဲ့ရှိကွတဲ့ သဲတုံနဲ့ ယှနျးယှနျးတို့လကျရှိအခွအေနတှေေ မှာလညျး ပွညျသူတှနေဲ့အတူရပျတညျကာ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော တကျနိုငျသလောကျပါဝငျလှုပျရှားနပွေီး အခုဆိုရငျသဲကတော့ မိသားစုလိုကျနအေိမျကနရှေောငျတိမျးနရေတာ တှရေ့ပါတယျ..။
“ရရကျရှိပါပွီ.. သူငယျခငျြးလဲ ပါသှားပါတယျ ။ ဘယျခြိနျထိ ခြုပျနှောငျထားမှာလဲဟငျ..? အထဲကသူငယျခငျြးတှကေိုတော့ GenZ တှေ မို့စိတျဓာတျမကမြှာ ယုံကွညျပမေယျ့ အပွငျကမိဘတှေ မိသားစုတှေ စိတျထိခိုကျနရေပါပွီ.. ကြောငျးသားတှကေို ပွနျပေးပါတော့ 💔 ကူညီနိုငျတဲ့သူတှေ ကူညီပေးကွပါ 🙏🏻..” ဆိုပွီး ဝမျးနညျးစှာရေးသားထားတာပါ..။ ပွညျသူပရိသတျတှကေလညျး ယှနျးယှနျးနဲ့အတူ ထပျတူခံစားကွရတဲ့အကွောငျးလေးတှကေို comment တှမှော စိတျမကောငျးစှာ ရေးသားပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
တော်လှန်ရေးမှာ ကြွေလွင့်သွားခဲ့တဲ့ သူတွေရဲ့ မိဘတွေစိတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်